Rosia: “Fanavakavahana” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Novambra 2017 4:25 GMT
(Marihina fa tamin'ny 20 May 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Tsy vitan'ny vola na ny fotoana ihany vao afaka amboarina ny solosainanao indraindray ao Moskoa fa ilaina ihany koa ny endrikao ivelany, ny faharetanao ary ny hafanam-ponao manokana. Nitatitra ilay mpisera LJ kmaka tamin'ny resadresaka vao haingana niarahana tamin'ny solontenan'ny sampan-draharaha fanohanana ara-teknika:
Niantso ny sampan-draharaha foibe aho mba hijery ilay solosainako manana fiantohana. Nanontany aho hoe hafiriana no hanoloan'izy ireo ny CD-ROM. Folo andro, hoy izy ireo namaly . Fa nahoana ary izany, hoy aho, manindry bokotra iray indroa fotsiny anefa no atao … Eny, mbola misy ny toy izao sy izao. Ho entiko any ilay izy ary ho hazavaina amin'izy ireo. Ary avy eo, halaiko any indray izany rehefa tonga ny fotoana .
Ary milaza ianareo fa misokatra manomboka amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 6 ora, tiako hazava. Midika ve izany fa tena misokatra amin'ny 10 ora tokoa ianareo? Izany hoe, raha tonga any amin'ny 10 ora aho, hisy olona ve any?
Tsia, hoy izy ireo namaly, tsy misy olona ato raha tsy amin'ny 11 ora.
Ary azonao atao ve ny mandefa olona iray ho any, hoy aho, satria tsy maintsy mbola hiasa ihany koa aho.
Eny, hoy ilay solontenan'ny sampan-draharaha Sergei tamiko, raha toa ianao ka lava ranjanana sady tsara bika sy ‘blonde’ dia eny fa azo alamina izany.
Nifanaiky izahay ny farany fa hisahirana ho tonga amin'ny 10:30 i Sergei, satria hanao ny sitrapon'ilay vehivavy tsara bika miaraka amin'ny volo volontany sy akanjo mampiseho tratra, manambady sy mananjanaka.
Manontany tena aho amin'izao fotoana izao raha tokony hiantso ny foiben'ny IBM ary hilaza amin'izy ireo ny momba ny fomba fiasan'ny sampan-draharaha Rosiana manokana – na raha tokony hitsidika ilay birao tsara fandraisana aho aloha.